टेम्पो ड्राइभर बनेकी स्वस्तिमाको फिल्म‘बुलबुल’को लाजपचेको 'असभ्य' ट्रेलर सार्वजनिक - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : बुधबार, माघ ०२, २०७५१३:४७ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
तस्वीर : बुलबुलको ट्रेलरबाट
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा रहेको चलचित्र ‘बुलबुल’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नेपाली मौलिक चलचित्र बनाएको दाबी गर्ने निर्मण पक्षले नेपाली मौलिकताको धज्जी उडाएको छ ।
ट्रेलर गाली र असभ्य शब्दले भरिएको छ । टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा रहेकी स्वस्तिमा “जाठी” शब्दको प्रयोगले सुरुवात गर्छिन् । टेम्पो रोकेर यात्रु कुरेको अवस्था दिखिन्छ । अर्की टेम्पो चालकले ग्याँस्टिकले पेलेको बताउँदा स्वस्तिमाले आर्को टिप्पन ल्याइदिने बताउँछिन् । साथै उनि थपछिन् “तलाई सबै रोग लाग्छ है ”। आर्की चलकले उत्तर फर्काउछिन् ‘बिहान-बेलुका कसरत हुन्छ अनि हुँदैन त’ ? त्यसै क्रममा स्वस्तिमाले “थुक्क जाठी” भन्दै नेपाली मौलिकताको दरिलो परिचय दिन्छिन् ।
“जाठी” शब्दको अर्थ भनिराख्नु नपर्ला ? त्यतिकैमा स्वतिमा रोकिइनन् उनले एक संवादमा “राणका वान” भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिन् । श्रीमान बितेको महिलालाई गाली गर्दा ‘राण’ भनेर गाली गरेको पाइन्छ , वान शब्दको प्रयोग पनि गाली गर्दा धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ यद्दपी उस्को अर्थ शरीरधारी हुन्छ । राण शब्द दुर्वाच्य मानिन्छ । सभ्य मानिस बिच यस्तो शब्द प्रयोग भएको पाइदैन् । झन शहरीया क्षेत्रका कतिपय बच्चाहरुको यो चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भए पछि ‘राण’ शब्द संग परिचय भएको छ ।
चलचित्र लेखन गर्नेले नेपाली मौलिकताका नाममा गाली बेइज्जती मात्रै लेखेका छन् भने निर्माता निर्देशकले यसैलाई कलाकार मार्फित उतारेका छन् । छानिछानी राम्रा चलचित्रमात्रै गर्छु भने स्वस्तिमाको यस्ता संवादले भरिभराउ चलचित्रलाई कसरी राम्रो भन्ने ट्रेलर हेरेरै अन्योल सृजना भएको छ । पछिल्लो समय दर्शकले नेपालीपन भएका चलचित्र रुचाइरहँदा यस्ता प्रकारका अश्लील शब्द र संवाद प्रयोग गरेका चलचित्र बनाइनुले दर्शक बिच्किने पक्का छ ।
नेपाली मौलिकता नेपालीपानमा आधारीत सभ्यताले श्रृंगारिएका धेरै विषय वस्तुलाई पर्दामा उर्तान् सकिन्छ । इतिहास र प्राकृतिक सुन्दताले भरिभराउ देशको बारेमा हजारौ विषयमा मौलिक र जीवन्तचलचित्र बनाउन सकिन्छ । त्यता ध्यान नर्दिएर एक दुई थान गालीलाई दर्शाउनु साँच्चिकै उराठलाग्दो स्थिति हो ।
आगामी फागुन ३ गते रिलिजको क्रममा रहेको यस चलचित्रमा नायकका रुपमा नवअभिनेता मुकुन भुसालको अभिनयलाई देख्न सकिन्छ । नवअभिनेता मुकुनकोे बोल्ने पश्चिमी नेपालको लवजले चलचित्र रोचक बनेको प्रतित हुन्छ ।
चलचित्रमा स्वस्तिमा र मुकुनको अलावा चलचत्रिमा बुद्धि तामाङ्ग, दीपक क्षेत्री, एलिना कार्की, जोयश पाण्डे आदिको पनि अभिनय रहेको छ ।
विनोद पौडेलले निर्देशन गरेको चलचित्रमा अविरल थापा लगायतको लगानी रहेको छ ।
सार्वजनिक ट्रेलरमा स्वस्तिमा खडकाले बोलेका असभ्य शब्दका अलाभा नुहाईरहेको र चुरोट तानिरहेको न्यूड सिन पनि देख सकिन्छ ।
हेरौँ, देशको बोल्ने फोटो !
पर्यटनमन्त्री आलेले फिल्म बनाउन दिए पाँच महिनाको तलब